Akụkọ Bible: Nsogbu Adị n’Ụlọ Devid - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
MGBE Devid malitere ịchị n’ime Jeruselem, Jehova mere ka ndị agha ya merie ndị iro ha ọtụtụ ugboro. O kwewo nkwa inye ndị Izrel ala Kenan. Ma ugbu a, site n’enyemaka Jehova, ala niile ahụ o kwere ha ná nkwa emesịala ghọọ nke ha.
Devid bụ ezigbo onye ọchịchị. Ọ hụrụ Jehova n’anya. Otu n’ime ihe ndị o mere mgbe ọ dọọrọ Jeruselem n’agha bụ ibubata igbe ọgbụgba ndụ Jehova n’ebe ahụ. O wee chọọ iwu ụlọ nsọ ebe a ga-edebe ya.
Ka oge na-aga, Devid mere otu mmehie dị oké njọ. Devid maara na o zighị ezi iwere ihe bụ́ nke onye ọzọ. Mgbe ọ nọ n’elu obí ya n’otu uhuruchi, o ledara anya n’ala ma hụ otu nwaanyị mara ezigbo mma. Aha ya bụ Bat-shiba, di ya bụ Yuraya, bụ́ otu n’ime ndị agha Devid.
Devid bịara nwee mmasị gabigara ókè n’ebe Bat-shiba nọ nke na o mere ka e dute ya n’obí ya. Di ya jere agha. Devid wee soro ya nwee mmekọahụ. E mesịa, Bat-shiba chọpụtara na ya atụrụwo ime. Devid nwere oké nchegbu, o wee zie Joab onyeisi agha ya ka o debe Yuraya n’ihu agha ebe a ga-egbu ya. Mgbe Yuraya nwụrụ, Devid wee kpọrọ Bat-shiba lụwa.
Jehova wesara nnọọ Devid iwe. O wee ziga ohu ya bụ́ Netan ka ọ kọọrọ ya banyere mmehie ya. Ị pụrụ ịhụ Netan ebe a ka ọ na-agwa Devid okwu. Ihe Devid mere wutere Devid nke ukwuu, n’ihi ya, Jehova egbughị ya. Kama Jehova gwara ya, sị: ‘N’ihi ihe ọjọọ ndị a i mere, ị ga-enwe ọtụtụ nsogbu n’ezinụlọ gị.’ Devid nwekwara nnukwu nsogbu n’ezie!
Nke mbụ, nwa Bat-shiba nwụrụ. E mesịa, Amnọn diọkpara Devid dinara nwanne ya nwaanyị n’ike, mgbe ha nọ naanị ha. Absalọm nwa Devid were iwe wee tigbuo Amnọn. E mesịa, Absalọm bịara mee ka ọtụtụ ndị nwee mmasị n’ebe ọ nọ, o wee mee onwe ya eze. N’ikpeazụ, Devid meriri Absalọm n’agha, e wee gbuo Absalọm. N’ezie, Devid nwere ọtụtụ nsogbu.
N’oge a niile, Bat-shiba mụrụ nwa a na-akpọ Solomọn. Mgbe Devid kara nká wee rịa ọrịa, Adọnaịja nwa ya nwara ime onwe ya eze. Devid wee mee ka Zedọk onyeisi nchụàjà wụsa mmanụ n’isi Solomọn, igosi na ọ ga-abụ eze. Ọ dịghị anya, Devid wee nwụọ mgbe ọ gbara afọ iri asaa. Ọ chịrị afọ iri anọ, Solomọn wee bụrụzie eze Izrel.
2 Samuel 11:1-27; 12:1-18; 1 Ndị Eze 1:1-48.
Site n’enyemaka Jehova, gịnị mesịrị mee ala Kenan?
Gịnị mere n’otu uhuruchi mgbe Devid nọ n’elu ụlọ nke obí eze ya?
N’ihi gịnị ka Jehova ji wesa Devid oké iwe?
Na foto a, ònye ka Jehova gwara ka ọ gaa gwa Devid banyere mmehie ya, gịnịkwa ka nwoke ahụ kwuru na ọ bụ ihe ga-eme Devid?
Nsogbu dị aṅaa ka Devid nwere?
Mgbe Devid nwụsịrị, ònye ghọrọ eze Izrel?
Gụọ 2 Samuel 11:1-27.
Olee otú imikpu onwe anyị n’ijere Jehova ozi si bụrụ ihe nchebe?
Olee otú Devid si daba ná mmehie, oleekwa otú nke a si bụrụ ihe ịdọ aka ná ntị nye ndị ohu Jehova taa? (2 Sam. 11:2; Mat. 5:27-29; 1 Kọr. 10:12; Jems 1:14, 15)
Gụọ 2 Samuel 12:1-18.
Gịnị ka ndị okenye na ndị nne na nna pụrụ ịmụta site n’ụzọ Netan si gakwuru Devid iji nye ya ndụmọdụ? (2 Sam. 12:1-4; Ilu 12:18; Mat. 13:34)
N’ihi gịnị ka Jehova ji meere Devid ebere? (2 Sam. 12:13; Ọma 32:5; 2 Kọr. 7:9, 10)